Iko basa rekare rinorota pamusoro pei?
Kuti tifunge mune ramangwana, hazvidi kuendesa kune mumiririri, sezvinoitwa usiku humwe munhu anogamuchira zviratidzo zvekupedzisira kuburikidza nekurota . Mukududzirwa zvakakosha kufungisisa zvose zvese zvechirongwa uye mutoro wemanzwiro.
Chaizvoizvo, kurota kwakadaro kunoratidza kuti inguva yekuchinja chimwe chinhu muupenyu. Muturikiri wehuroti anorayira kugadzirisa kukanganisa kwepoko kuitira kuti zvinhu zvose zvizoshanda. Mune zvimwe zviitiko, basa rekare rinoratidza kusagutsikana pamusoro penzvimbo itsva. Kurara, izvo zvaimbova vashandi pamwe chete navo kubasa, zvinogona kufananidzira kushuva kwavo. Kunyange zvakadaro inogona kuva nyevero pamusoro pekutaura kwemamiriro ezvinhu ane njodzi, izvo zvichange zvisingakanganisi mukurumbira. Dreambook anokurudzira kuti uchenjere mbavha uye vanhu vasina hanya. Kutarisa chivako chawakamboshanda kare, saka, nokukurumidza kuchave nekumwe kuchinja. Kana yakazoitika kuti iparadzwe, zvinoreva kuti mune bhizinesi kana bhizinesi kunogona kuva nedambudziko.
Iyo kurota umo basa rekare raifungidzira uye iwe wakanzwisisa kuti zvinhu zvose zvinofamba zvakanaka navo, zvinomiririra kuzadzika kweroto rekare. Kuona munhu akatsiva panzvimbo yekare, ipapo, mune basa idzva, pachava nedambudziko. Kana iwe wakadzokera kumabasa ako ekare uye uri kurarama nebasa racho zvakakwana, ndezvokugadzirisa hupenyu hwako. Kuona imwe yekare basa mumaroto zvinoreva kuti uri kurega mabasa ako muhupenyu chaihwo, izvo zvinogona kutungamirira kukutuka uye kunyange kubvisa. Mune rimwe remabhuku ekurota kune ruzivo rwakadaro rwuri kuratidza kuti iwe unoda kudzosera zvakare, uye izvi zvinogona kukanganisa zvose basa uye rudo sphere. Kana iwe uchida kuwana basa, saka iwe unowanzofunga pamusoro pechiratidzo ichi. Bhuku reroto rinotaura kuti iwe unogona kuzviita.
Inowanikwa masikati zviratidzo
Chii chine mavanga ane mvere akafanana?
Chii chinoita kuti bhiri rekubatana rirove?
Sei uchirota pamusoro pokukwira pasi?
Chii chinotarisirwa nechitoro chacho?
Chii chinonzi buns?
Sei tichirota pamusoro pezviyo?
Nei chiroto chichena chichirota?
Sei ropa riri mumaoko ake richirota?
Njiva yakagara pawindo yewindo - chiratidzo
Sei uchida kuroorwa?
Sei uchirota kutora mifananidzo?
Kubwinya kwenguva refu-mangwanani nekudyara
Marigolds - mishonga yemishonga
Tafura inogadziriswa - pfungwa dzekicheni duku
Kuwedzera - zvakanaka uye zvakaipa
Masvingo emadziro eimba
Oat bran kuderedza kurasikirwa
Bvisa mabhegi ekuchengetedza zvinhu
Vishnevsky mafuta anonhuwira
Mutambo weAn Annunciation
Iwindo rematombo rinowedzera
Cranberry ne cystitis - sei kutora?
Dhani rakakosha nemaroriki
Panguva yakadini iyo yakagadzirirwa?
Curd kuki - recipe nyore
Chirwere checheche nokuda kwekunaka, kumusha nekuwedzera: 12 upenyu hunobatsira